I-China mveliso iphuma ngemarble emhlophe emhlophe i-Virgin Mary eqingqiweyo iyathengiswa Ubugcisa obufanelekileyo
Umzi mveliso weflethi emhlophe emhlophe emhlophe uMariya
Inombolo yomzekelo: FMQ-202
Ubukhulu: H: 180 cm okanye wena
Lo mfanekiso mhle wemabhile umhlophe weNtombikazi enguMariya ukrolwe ngesandla emhlophe emhlophe emhlophe eneenkcukacha ezimangalisayo eziya ebomini. Wayenxibe isigqubuthelo eside esimbejembeje esineepateni ezintle ezikroliweyo, esonge izandla ethandaza, ephethe irosari ezandleni enomnqamlezo. Lo ngumsebenzi wobugcisa omangalisayo. Imifanekiso yethu eqingqiweyo kaMary marble inobungakanani bobomi kwaye inokubekwa njengemihombiso kuyo nayiphi na icawa yangaphakathi. Ewe kunjalo, zikulungele nokusetyenziswa ngaphandle.
Ilitye lendalo ilitye lendalo uMariya igrafu entle kakhulu kwaye intle. Ukubonakala kwelitye lendalo kunye neenkcukacha ezintle zokuqingqiweyo kufuneka zikulungele ukubekwa kuyo nayiphi na igadi yangaphandle okanye nakweyiphi na icawa yamaKatolika. Ubuso bethu obusikelelweyo nobumnene bukaMariya, izandla zakhe zisongwe kunye, uyasithandazela ngokutyebileyo nangokuhle.
Sisebenzisa izixhobo zemarmore emhlophe ezikumgangatho ophezulu ukwenza umfanekiso oqingqiweyo wemabhile kaMariya oyiNtombikazi. Ngaphambi kokubeka iodolo, siya kunxibelelana nomthengi ukuba yeyiphi na into yemarble emayisebenzise emfanekisweni. Iingcibi zethu zemarmore ezinamava zinokukrola iipateni zemabhile ezicace gca kubathengi. Yonke imifanekiso eqingqiweyo yemarble ikrolwe ngesandla ziingcibi zethu ukuqinisekisa ukuba zonke iinkcukacha ziphathwa ngokugqibeleleyo.
Umfanekiso oqingqiweyo wemarble lukhetho oluhle kuyo nayiphi na intsapho yamaKatolika okanye icawa. Imifanekiso eqingqiweyo yethu yangaphandle yenkolo ayisiyontle kuphela, kodwa ikwabonelela ngenkuthazo enkulu kubomi obugcwele ukholo nothando. Ungandwendwela iwebhusayithi yethu ukhethe kuyilo lwethu ngakumbi.
Asinakwenza kuphela umfanekiso wobungakanani bemabhile kaMariya oyiNtombikazi, kodwa senze naluphi na ubungakanani ngokweemfuno zakho. Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nabasebenzi beenkonzo zethu okanye usithumelele i-imeyile ngolwazi oluthe kratya.
Egqithileyo Ifektri emhlophe yemarble emhlophe enguMariya eqingqiweyo iyathengiswa
Okulandelayo: Ifektri yemarble pieta eqingqiweyo iyathengiswa
Imabula emhlophe uYesu kunye nomfanekiso oqingqiweyo wabantwana uyathengiswa
Umfanekiso oqingqiweyo we-marble Virgin Mary othengiswayo
Ihowuliseyili White Natural Marble Church Decor Pu ...
Elungiselelweyo Size Modern Church Marble Isibingelelo Tabl ...
Ubungakanani bobomi beMarble Statue yeLady of Mount Carmel ...